Imibhikisho iholele ekuhlakazweni kohlaka olulwa nokuqola eNigeria - Bayede News
Home » Imibhikisho iholele ekuhlakazweni kohlaka olulwa nokuqola eNigeria
INhloko yamaphoyisa eNigeria ihlakaze iSpecial Anti-Robbery Squad (SARS) yayo ngokushesha ngesonto eledlule ngokusho kwesitatimende esikhishwe ngamaphoyisa.
Lesi senzo salesi sikhulu senzeke ngemuva kwemibhikisho ezweni lonke kukhalwa ngesihluku esenziwa yilolu phiko.
Imibhikisho iqale ezinsukwini ezedlule ngesikhathi kusabalala ividiyo ngesonto eledlule okusoleka ukuthi iveza amalungu alolu phiko olwaziwa ngeSARS edubula ebulala owesilisa esifundazweni iDelta. Le mibhikisho kanye nevidiyo kwagqugquzela umkhankaso ezinkundleni zokuxhumana emhlabeni jikelele wokuthi lolu phiko luhlakazwe.
“Ukuhlakazwa kwalolu phiko kuyisizathu sokukhala kwezakhamuzi zaleli lizwe,” kusho isitatimende.
Isitatimende siphinde sengeza ngokuthi amalungu alolu phiko azobekwa kabusha kwezinye izikhundla futhi amaphoyisa asazomemezela isu elisha lokulwa kophiko (SARS) nokubanjwa kwenkunzi ngezikhali, ukuthumba kanye nobugebengu obunodlame.
Isandla esiqine kakhulu salolu phiko sekuphele iminyaka eminingi sithola ukugxekwa yizakhamuzi zaseNigeria ikakhulukazi intsha, ethi amalungu eSARS ahleze ebheke bona ngqo, ebashaya futhi ebaphanga.
Ubambiswano lwabeNafcoc nabeTransnet KwaZulu-Natal
Ngesonto eledlule amaphoyisa akuleli zwe asebenzise isisi esikhalisa unyembezi ukuhlakaza ikhulu labantu ebelikade libhikisha enhlokodolobha yaleli zwe i-Abuja, abakade bebukele bathe bekungaqali ukwenzeka njengoba kwenzekile emasontweni amabili edlule.
Abagxeki balolu hlaka bathi amalungu amaphoyisa kanye nabezepolitiki kuvela ukuthi ngaphambilini kade babethi babeluhlakaza lolu hlaka futhi sebezolihlela kabusha kodwa akukaze kube nomehluko kuze kube yimanje.
ngu-Anathi Mtaka Oct 23, 2020